Izandla zikaGolide zikaGoogle -Geofumadas
Ikhaya/ezintsha/Izandla zegolide zeGoogle
ezintshaInternet kunye neBlogs
Ngokuqinisekileyo ubomi abunabulungisa, kuba i-Opera ayifikeleli kwi-0.53% nangona kuthathe iminyaka emininzi ukuya apho nokuba sisixhobo esizinzileyo.
Ukusuka inqindi lelinye lawona makhathuni aphambili kule nxalenye umsi:
Into engathandabuzekiyo kukuba nangona uGoogle watyikitya ukuzibophelela kunye neMozilla ukubaxhasa iminyaka emithathu, kuya kufuneka igqithise i-Firefox yi-inertia. Omnye kuba ukukhula kweFirefox kwakubangelwa yimpembelelo yokuba iGoogle yayinika ngeAdWords de kwaba nguAgasti ophelileyo xa ihlawule imali eyi- $ 1 ukuyikhuphela.
Alithandabuzeki elokuba iprojekthi yeMozilla ihambe umgama omde, kwiinyanga nje ezimbalwa ezidlulileyo ikwazile ukophula irekhodi lokufumana ukhuphelo oluyi-8 yezigidi ngosuku olunye. Nangona uGoogle ebambe ikota yayo ngeentsuku ezintathu kuphela; enokucinga ukuba sele unabasebenzisi abazizigidi ezi-2 usebenzisa iChannel.
Kuya kuhlala kubonwe ukuba kwenzeka ntoni xa iGoogle iqala ukukhuthaza i-Chrome ngokukrakra, kuba ngoku kukho iintengiso ze-AdSense ezithobekileyo kulo naluphi na uphando olunxulumene nokukhutshelwa, i-Intanethi, ukukhangela njl.njl.
Ngokwelinye icala, iFirefox ikhangele umanyano kunye neYahoo, eyinyusayo phezulu kwiphepha layo lasekhaya nge unxibelelwano esithetha ngohlobo lwe "Yahoo Edition" yeFirefox 3.
Ukuba iFirefox ikufumanela le nto inzima, masitsho ukuba ungayilindela iGaleon neSafari.
Siza kubona oko kwenzekayo,
Usuku lwebhola ekhatywayo, akukho GIS
Iya kwenza ntoni uGoogle?
UJuan Manuel uthi:
Wow, kubonakala ngathi u-Enrique Dans, akayena ungcwele wokuzinikela kwam kodwa ucinga, ucinga okufanayo:
Njengoko iCinco Días ithi, i-Chrome ekugqibeleni ivelisa inyaniso "inethiwekhi yikhompyutha". Akunako ukukhuphisana noMhloli, ukhuphisana neWindows. Kulapho, kwaye kungekhona ukuhlalutya njengendlela yokuhambahamba, kulula ukuba sihlole phi ukubaluleka kwayo.
QAPHELA: Okumangalisayo njengokuba njalo uDavid Pogue e-New York Times, echaphazela ngokucacileyo le ngcaciso. Kuhamba umhla:
Ngaba (iGoogle) uzama ukwakha iqonga lokusebenzisa isofthiwe yexesha elizayo, apho ukugxininisa iWindows kunye nezinye iinkqubo zokusebenza? Nguwe ewe.
QAPHELA 2 (06 / 09): Ukuchazwa okufanayo, ukuphawula kwiSoitu, "Isiqulathi esiluphuphayo sokuba yinkqubo yokusebenza".
Nibingelela kuzo zonke i-geofumados.
Enkosi John, unyanisile ngokupheleleyo. Nangona kufuneka kucace ukuba kwi-avalanche yokuwa kwi-Internet Explorer, iFirefox iya kuba nzima.
Ngokuqinisekileyo i-Google ilandele inkqubo yokusebenza kwi-intanethi.
Ndicinga ukuba ukhangeleka kwi-Firefox njengenjongo yeCrother, ulahlekelwa yipu shot.
Ndiye iintsuku ezimbalwa kunye nale ngcamango i-rondadome: ithagethi yangempela yiMicrosoft Office kunye ne-intranet (nangona iWindows ngokwalo), oko kukuthi, umsebenzisi wenkampani.
I-Chrome ifaka i-Java V8 kunye neGoogle Gears njengencedisi yesicelo yangaphandle.
Ukuba unokwenza yonke imisebenzi yakho kwisiphequluli sakho, kutheni ufuna i-Office Suite okanye, kungcono kunjalo, kutheni ufuna iWindows ifakwe ???
Saint Germain eLaye uthi:
Ndiyayithanda iGoogle chrome, iyakhawuleza, ndiyathemba ukuba izakubulala umhloli we-intanethi ...
I-PC enkulu, igazini elikhulu